5 Naa akarị n'ọtụtụ obodo Iji Explore Na France | Save A Train
Home > Train Travel France > 5 Naa akarị n'ọtụtụ obodo Iji Explore Na France
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/11/2020)
France bụ a na-ewu ewu njem nleta hotspot ekele ya mara mma obodo na ama akara. Na mba ahụ bụ a dream ebe ama ama gburugburu ụwa maka ya ịrịba omenala na na-atọ ụtọ nri. Ezie na ọtụtụ ndị njem nleta enubata Paris, obodo pụrụ mgbe mgbe na-nnọọ mmadụ karịrị akarị, karịsịa n'oge okpomọkụ. Luckily, France nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye karịa nnọọ Paris na anyị inyocha ise nke obere mmadụ jupụtara na obodo n'okpuru.
Reims bụ obodo na Champagne bụ wine mpaghara na abụọ bụ nnọọ ọmarịcha. Ọ ụlọ ụfọdụ nke kasị ama ubi vaịn na ụwa na ndị njem na-n'aka na-enwe ya Omume ikuku. Ọ bụrụ na ị na-a champeenu ofufe, na-akwụ ụgwọ na-eleta bụ kwesịrị. N'ógbè bụ incredibly mara mma ma ọtụtụ obere mmadụ jupụtara karịa mba isi obodo. Ebe na Champagne, ijide n'aka na-a edu okpuru ulo tour ma na-amụta ihe banyere otú champeenu e mere.
Metz ka Reims Ụgbọ oloko
Luxembourg ka Reims Ụgbọ oloko
Lyon ka Reims Ụgbọ oloko
Lyon bụghị naanị a udo ezumike ebe kamakwa a UNESCO World Heritage Site ruru ya ma ama Roman mkpọmkpọ ebe na pụtara ngosi ihe mgbe ochie. Ọ bụrụ na ị na-a foodie, Lyon na-otu nke kasị mma ebe na-enwe ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị na-atọ ụtọ nri pụrụ iche na France, ọ bụ ezie na ijide n'aka na-achọ ndụmọdụ banyere na-anọ mma mgbe na-agbalị ọhụrụ oriri ná mba ọzọ.
N'ihi na ndị nwere mmasị na ije, Lyon bụkwa ebe obibi ọtụtụ ụka Renaissance na ị ga-ahụ n'ebe nile obodo.
London na Lyon Highspeed Trains
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-esi ísì ụtọ, Grasse bụ zuru okè ebe maka gị. Ozugbo ị nwetara ya Omume, dara oké ọnụ n'okporo ámá, ị ga-ahụ onwe gị na-achọ ka ha laghachi ọzọ na ọzọ. Grasse bụ a mara mma ebe dị tinyere French Riviera na, ụzọ kasị mma ime ihe obodo nke a bụ ime French!!
Famous n'ihi ịbụ nke abụọ kasị ukwuu obodo na France, Marseille bụ a obodo na otu nnukwu ala gbara osimiri okirikiri ihu igwe. Ebe ị ga-The Epic mkpọmkpọ ebe na ịtụnanya art emmepe ahapụ gị ọbịa ọtụtụ awa. N'ihi na ndị na-achọ ntụrụndụ, Marseille bụ n'ụlọ ka pụtara osimiri ebe i nwere ike asa ahụ na obi ụtọ oké osimiri. Marseille awade kacha mma nke ma ụwa ka ọ na-ejupụta na omenala omume nakwa dị ka serene ebe iji zuru ike.
Ọtụtụ mgbe na-ewere otu nke France kasị underrated obodo, Lille bụ obere mmadụ jupụtara karịa ụfọdụ nke ọzọ na-ewu ewu French ebe ma ka dokwara mara mma. njem nleta nwere ike kpagharịa site asọfe Lanes na-enwe yi ije na-ekwo ekwo ikuku n'ụzọ. N'ihi art hụrụ, na Obí nke Ọma Arts lọ ihe ngosi nka bụ ebe a na-aghaghị ileta ebe ọ bụ na ọ bụ ebe obibi ndị ọrụ nchịkọta abụọ nke France.
Mgbe eleta ma ọ bụ ya agaa leta France ijide n'aka ghara uche ọ bụla dị n'elu obodo! Ka ha na ndị na-erughị mmadụ jupụtara, na-akpụ akpụ na gburugburu ha ga-mgbalị na ị ga-enwe obi ụtọ pụrụ iche e ji mara obodo nke ọ bụla. Otu ihe ndị a n'obodo niile nwere na-ahụkarị bụ ebe ndị mara mma na – n'ezie – ịtụnanya nri, ma lezie echefula, na Europe ndị mmadụ zụọ njem na Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-less-crowded-cities-to-explore-in-france%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)